NINKAAGA SABABAHAAN AYUU KU NACAY GALMADA? | Gaaloos.com
Home » galmada » NINKAAGA SABABAHAAN AYUU KU NACAY GALMADA?
NINKAAGA SABABAHAAN AYUU KU NACAY GALMADA?
Gabarayheey hadaad aragto si kadis ah in ninkaada uusan rabin kulankaada sariirta ama uusan kaa codsaneyn maskax yeelo is badelkaadaas adaa u sabab ah haddii arimaaan aad sameeyneyso , waxaana arimaha ninka ku qasbaya in uusan baahi u yeelan ciyaartaas ka mid ah .
1- In Haweeneyda ka cararto in ninka la sameeyso ciyaarta oo ay iska ilaaliso xubintiisa taasi ninka aad ayay uga careysiisaa waxa uuna u qaadanayaa in aad dibsaneyso oo aad ka carareyso jirkiisa taasina waxa u fasiranayaa in aadan jecleyn.
2- Ninka waa neceb yahay haweeneyda aan daryeelin muuqaalkeeda iyo nadaafaddeeda , sidoo kale aad ayuu u neceb yahay haweeneyda mar waliba muujisa in aysan ku qanacsaneyn muuqaalkeeda ama culeyskeeda zaa`idka ah .
3- Haweeneyda hadasha inta lagu jiro ciyaarta taasina ninka waxa ay ku qasbeysaa in uu waayo wax raaxo ah waxa ayna gubtanews.com ay ku leedahay ninka ma jecla haweeneyda raaxada ka kala gooysa ee gabaryaheey il gaar ah isaga yeelo arintaas .
4- Midsa iska yee-yeesha in ciyaarta aysan rabin kaliya ay u sameyneyso in ninka ay qanciso .
5- Haweeneyda kaliya rabta in ninka uu ka codsado ciyaarta oo bar baryo iyo tuugmo uga keensado .
6- In haweeneyda ay si jees jees ah uga hadasho habka ciyaarta ee ninka taasina waxa ay u muujineysa in kuu-kuun laminaagiisa aysan rabin oo ay danta ku qasbeyso .
Title: NINKAAGA SABABAHAAN AYUU KU NACAY GALMADA?